I-Aussiedor: Ingabe i-Australian Shepherd Lab Mix ikufanele? - Izinhlobo
Yazi i-Australian Shepherd Lab Mix
Yakhiwe kusuka kuzinga eliphezulu lokuzingela nokwalusa izakhi zofuzo, i- I-Australian Shepherd Lab mix empeleni kuyinqubo yokusebenza kwenja esebenzayo.
Futhi kubizwa I-Aussiedor, i-Australian Sheprador, i-Aussie Sheprador, i-Aussie Lab, iSheprador, neLab Aussie Mix, le nhlanganisela yaziwa ngobuhlakani bayo kanye nokugijima.
Kepha abanikazi bezinja abangomakadebona bazokutshela ukuthi izinja ezinekhono kakhulu zidinga abaphathi abanekhono kakhulu. Ingabe unayo okudingekayo?
Uvelaphi umhlanganisi we-Australian Shepherd Lab?
Ngabe i-Aussiedor ibukeka kanjani?
Isimo: Ingabe i-Australian Shepherd Lab ixubeka nezinja ezinhle?
Ukunakekela i-Aussiedor yakho
Impilo: Imiksi Lab Labelusi Base-Australia ihlala isikhathi esingakanani?
Ungayithenga kuphi imidlwane ye-Aussiedor?
Ezinye izinhlobo ze-Australian Shepherd nezinhlanganisela zeLabrador
Ingabe i-Australian Shepherd Lab mix yakho ifanelana kahle?
Njengezinye izinhlobo eziningi zabaklami, asinalo ulwazi oluningi ngemvelaphi yale hybrid.
Njengoba kunikezwe ukuthi izinhlobo zayo zomzali, i-Australian Shepherd neLabrador Retriever, zombili zithandwa kakhulu, kungenzeka ukuthi ukuxubana kube khona isikhashana.
Ukuzalela ngamabomu kungenzeka kwaqala ngeminyaka yama-1990s eNyakatho Melika, ngokuhlose ukuhlose ukuhlakulela i inja yokusebenza ehlukile .
Ukuthola imizwa yokuthi imiphi imikhuba nokuziphatha okungakhula e-Aussie Sheprador yakho, sidinga ukufunda uhlu lozalo lwayo. Ake siqale nge-Australian Shepherd.
Abelusi base-Australia: Izinja zasepulazini zaseMelika
Noma igama labo lisikisela okuhlukile, Abelusi Base-Australia , obeye aziwe njengo Ama-aussies , empeleni zinezimpande ezintabeni zasePyrenees.
Kwehliswe kusuka ku- Pyrenean Shepherd , Abelusi base-Australia babekhona ezifuyelwe umhlambi wezimvu nezinkomo eceleni kwamagquma aseBasque.
Ngenkathi abaseYurophu benza ikoloni e-Australia, bafika nezinja zabo zokwalusa eziyigugu. (Lesi stint e-Land Down Under yilapho uhlobo luthola khona igama lalo.)
Hlangana ne-Australian Shepherd Dogs
Ekugcineni, lawa ma-canine adlulela emafulethini aseCalifornia futhi aba yisisekelo se-Old American West.
Abelusi base-Australia basekhona edume ngokwazi kwabo ngokomzimba nangokwengqondo . Thatha uhambo oluya epulazini elisentshonalanga noma uvakashele i-rodeo, futhi ungahle ubone i-Aussie isebenza kanzima.
ILabrador Retrievers: Uhlobo oluthandwayo lwaseMelika
Uma ungakaze ube ne I-Labrador retriever ngokwakho, mhlawumbe kukhona umuntu omaziyo okwenzayo. Noma mhlawumbe ngisho nabantu abaningana. Labradors bekulokhu Izinhlobo zezinja ezithandwa kakhulu eMelika kusukela ngo-1991 , ngemva kwakho konke.
AmaLabhu aqanjwe ngegama, lawa ma-canine avela eNewfoundland, eCanada, njengokubuyisa izinyoni zamanzi.
Hlangana nezinja zeLabrador Retriever
Ekuqaleni kwekhulu le-19, izikhulu zaseBrithani zaqaphela amakhono eLabrador njengomngane wokuzingela nokudoba.
Emashumini ambalwa eminyaka alandelayo, lolu hlobo lwaphawuleka emakhaya ngaphesheya kweGreat Britain naseNyakatho Melika.
Namuhla, amaLab afeza injongo yawo yokuphila njenge abazingeli, ukubuyisa, nezilwane ezifuywayo zomndeni . Zibuye zisetshenziswe kaningi njengezinsizakalo noma izinja zamaphoyisa.
Okungahle ungakuqapheli ukuthi kukhona izinhlobo ezimbili ezihlukile zeLabrador . Ngenkathi lezi zinhlobonhlobo zingaziwa ngokusemthethweni, abathanda iLabrador bangakwazi ukubona umehluko phakathi kweLebhu laseMelika neleNgisi kusuka ebangeni eliyimayela.
I-Stocky ne-thick-neck, IsiNgisi, noma Amalebhu WaseBrithani zivame ukukhuliswa njengezinja zokubonisa. Zivame ukuba nezenhlalo, uma kungenjalo zingakhethi kancane.
Oncikile, mude Ilebhu laseMelika izalelwa ukusebenza nokuzingela. Lezi zinhlobonhlobo zeLab ziqeqeshwa kakhulu futhi ziqhutshwa ngendlela emangalisayo. Bazodinga okuningi emnyangweni wokuzivocavoca kunama-English Labs.
Kokubili amaLabradors esiNgisi nawaseMelika angasetshenziselwa ukuzala ama-Aussiedors. Abazalisi abanolwazi bazokwazi ukukutshela ukuthi iziphi izinhlobo abazisebenzisela abelusi babo base-Australia.
Uma bekufanele sichaze ukubonakala kwe-Labrador Retriever yase-Australia ngegama elilodwa, singahamba i-hodgepodge . Ayikho indlela ngokoqobo yokubikezela ngokunembile ukuthi lezi ziphuphu zizovela kanjani.
I-Purebred Labradors cishe i-shades eqinile njalo ophuzi, omnyama, noma ushokoledi . I-Purebred Australian Shepherds, noma kunjalo, ingaba inhlanganisela ye- okumnyama, okubomvu, ukuhlangana okuluhlaza okwesibhakabhaka, noma ukuhlangana okubomvu .
Umdlwane we-aussiedor - Umthombo Wezithombe
I-Aussiedor yakho ingaba yinoma iyiphi yale mibala, futhi brindle noma ukhilimu . Akunakusho ukuthi, ukuphela kwendlela yokwazi ukuthi i-Aussiedor izobukeka kanjani, ngokuyibuka!
Izwi elisheshayo lokuxwayisa ngezinja ezihlanganiswe ngombala: izakhi zofuzo ezidala amaphethini wokuhlangana nazo zingadala izindaba ezibucayi zezempilo .
Lapho inja izuza amakhophi amabili ohlobo lwe-merle, basengozini enkulu yokukhubazeka kokuzwa nokubona.
Ama-Labrador Retrievers awathwali i-merle gene, kepha abelusi base-Australia bangakwazi. Ngalesi sizathu, i-Aussie Lab ingaba yindlela enhle kubanikazi abafuna ukubukeka kokuhlangana kodwa abafuni ukudela impilo yenja yabo.
Izakhi zofuzo zeLab aziqinisekisi isikweletu sempilo esihlanzekile esizenzakalelayo, noma kunjalo. Uma uthola umfuyi onama-merle Aussiedors, yenza olunye ucwaningo ngemikhuba yabo yokuzalanisa ukuze uphephe.
Ukuphelelisa uboya babo obunemibala, izingxube zeLab Aussie zingaba nazo okuluhlaza okwesibhakabhaka , nsundu , noma amehlo amber . Izindlebe zazo zivame ukuba yisihlava, zehle ziye ezincwadini ezingunxantathu.
Ikhanda elibanzi, elilinganisiwe nesifuba esijule ngokulingene lizungeza ubuso be-Labrador Retriever obuhlakaniphile, bezemidlalo.
Ingxube ye-Australian Shepherd Lab izoba nkulu kangakanani?
Usayizi oqondile nokwakhiwa kwe-Aussiedor yakho kungaba nzima ukukucindezela phansi, kepha ungalindela ukuthi babe naphakathi kuya kosayizi abakhulu.
Lapho sebekhule ngokugcwele, abelusi base-Australia bavame ukukala Amasentimitha angama-22-25 (56-64 cm) futhi inesisindo noma yikuphi ukusuka Amakhilogremu angama-40-80 (18-36 kg).
Ungase uzibuze ukuthi kungani isisindo se-Aussie Lab singahluka kakhulu. Konke kuza kubazali bakho be-pup.
Uma i-pooch yakho ivela kuLebhu lesiNgisi, bazoba namandla ngaphezu kwe-Aussiedor evela eLebhu laseMelika.
Ngokufanayo, i-pup yakho ingavela ku-a okuncane Umalusi wase-Australia, okuholele enguqulweni encanyana ye-Aussie Sheprador ejwayelekile.
Ukuze uthole umbono ongcono wokuthi i-Australian Shepherd Retriever yakho ingabukeka kanjani njengomuntu omdala, khuluma nomfuyi wakho futhi uhlangane nomama nobaba wengane yakho.
Kungamangali ukuthi, phakathi kwezidingo zabo zamandla nosayizi, amaLab Aussies adinga isikhala esiningi ngangokunokwenzeka. Lolu hlobo ayifanele impilo yasemafulethini futhi ngizojabula kakhulu ekhaya elinamagceke amakhulu abiyelwe.
Ngabe abelusi base-Australia bayachitha?
Ngaphezu kohlobo lwayo oluhehayo lwemibala yoboya, i-Aussie Labs ibuye izincome ngamajazi amabili afudumele, amelana namanzi. Ngenkathi izinwele zabo zimfushane ngokulingene ngobude, lawo majazi aphindeka kabili… kakhulu .
Ezinye izingxube ze-Australian Shepherd Lab zichitha ngaphezu kwezinye, kepha ungalindela ukumaphakathi kuya ekuchithekeni okusindayo noma kunganjani. Uxolo, abanesifo sokungezwani komzimba. Lokhu kungenzeka kungabi yinja eyi-hybrid yakho.
Ukuqhamuka ezinhlotsheni ezimbili zabazali abathandekayo, ama-Aussiedors aziwa ngawo imvelo eqondiswe emndenini . Belangazelela ukujabulisa futhi bekulungele ukusebenza noma ukudlala njalo, lolu hlobo lomklami lungena kahle emakhaya amaningi asebenzayo.
Izingxube zeLab Aussie zivame ukuba nesineke impela ezinganeni, kodwa zizobekezelela yenza kangcono ngezingane ezindadlana .
I-Chocolate Aussiedor - Umthombo Wezithombe
Amachashazi amancane angazithola eqhutshwa futhi ekhonjiwe ngesikhathi sokudlala, ngakho-ke ukugadwa njalo kuyadingeka.
Ngaleyo migqa, ungabona iSheprador yakho yase-Australia igxuma ezithendeni zezingane zakho. Lokhu akulona udlame, kodwa kunalokho kuyinja yakho umuzwa wokwalusa ukukhahlela phakathi.
Ngokufanayo, kufanele qaphela eduze kwezilwane ezincane noma ezindaweni ezingabiyelwe .
Njengoba kunikezwe isizinda sabo sokuzingela nokwelusa, i-Aussie Labradors ihlala ilungele umdlalo omuhle wokujaha.
Yenza okusebenzayo, futhi usebenzise ukuqeqeshwa okuhle ukuqinisa ukutholakala kwemvelo yenja yakho ibe yimidlalo yokuzithokozisa nokukhiqiza.
Ezikhathini zakho zokuqeqeshwa zansuku zonke, gxila ekuthuthukiseni ukukhumbula okuthembekile , kanye nomehluko phakathi kwe- ukwelusa okulungile nokungafanele .
Izinhlobo zeLabrador Australian Shepherd ziphakathi kwezinyosi ezisebenza emhlabeni wezinja, ngakho-ke ukuqeqeshwa kuzoba ucezu lwekhekhe . Bazofunda ukuthobela okuyisisekelo ngasikhathi sinye, bakukhulule ukuthi usebenze kulezo zimilo eziqondene nokuzala.
Ufuna ukwenza izinto zithakazelise? I-Aussie Shepradors zilungele izivivinyo zekhono nokuqeqeshwa kwezinja zensizakalo. Futhi banobuhlobo bokufunda amaqhinga weqembu le-canine!
Thatha umzuzu ubuke uLuna wase-Aussiedor ekhombisa irekhodi lakhe kule vidiyo, futhi mhlawumbe uthole imibono embalwa ngomfundi wakho wakusasa.
Ngokungeziwe emikhubeni ye-doggie nokukhumbula, uhlobo lokuqeqeshwa kwakho lwe-Lab Aussie mix kufanele lufake phakathi ingxenye enamandla yokuxhumana nabantu.
Abakwa-Australian Shepradors bangabantu abahle ngendlela exakile nabathanda ukupakisha, kepha abahlali bethanda ukwenza abangane abasha njalo. Okwabo ukuthambekela kokuvikela inja kungaphenduka ubudlova bendawo uma ungaqapheli.
Ngokushesha ngangokunokwenzeka, qala ukufundisa i-Aussie Lab puppy yakho ukuthi ungabingelela kanjani izinja nabantu abasha. Babonise ukuthi nguwe ophethe lapho kufika umuntu ongamazi.
Ngenkathi uqeqesha inja yakho, kufanele futhi uziqeqeshe. Funda ulimi lomzimba womntwana wakho ezimeni ezahlukahlukene. Funda izimpawu zabo zokungakhululeki noma ukwesaba.
Ngokushesha lapho ungathola khona ukwesaba kukaFido, uyashesha ukungenelela.
Ngenxa yobuntu babo obunesibindi, abanikazi bezinja okokuqala bangase bakuthole kunzima ukuhambisana nenhlanganisela ye-Australian Shepherd Lab.
Akudingeki ukuthi ube yingcweti kuzo zonke izinto ze-canine, kepha kufanele ube nolwazi ngezinhlobo eziqhutshwa ngamandla amakhulu .
Ngokwengeziwe, umnikazi ofanele wase-Australia iSheprador uphumelela ngokunakwa ngumngani wakhe omkhulu onemilenze emine.
Ngokuqondene ne-Aussie Labs, ilanga liyaphuma futhi lishone nabantu babo. Lungiselela ama-anecdotes amnandi wengane yakho efaka indlela yayo kusofa ukuze izithinte futhi ikulandele eduze kwendlu ungami.
Lokhu kuncika kuza ngentengo, noma kunjalo. Isiphambano se-Australian Shepherd Lab sithi ithambekele ekukhathazekeni ngokwehlukana . Akufanele ishiywe yodwa noma ikerishwe isikhathi esingaphezu kwamahora ambalwa ngosuku.
Gcina izidingo zobungani babo ngaphambi kokuthenga enye yalezi zinambuzane. Kukangaki ungaba sekhaya nenja yakho? Ushiye ukunakekelwa namandla amangaki ekupheleni kosuku lokusebenza?
Ngokunikezwa kwalolu hlobo lokusola okusolisayo nesimo senja yeVelcro, bekungeke kube ngumqondo omubi ukwakha ubudlelwano nomhleli wenja, noma ngabe awucabangi ukuthi uzobudinga.
Uma kwenzeka kufanele ube kude nekhaya isikhashana, i-pooch yakho isivele inesibambiso esijwayelekile sokuyigcina inkampani uze ubuye.
Hlela ukuhlangana futhi ubingelele izihlalo ezibuyekezwe kahle endaweni yakho. Uma uthola umuntu oyedwa noma ababili abalungile, setha izinsuku zokudlala nabo kanye nomdlwane wakho kanye ngenyanga noma ngaphezulu.
Lokhu kuzogcina ukuhlala kwakho kumusa omuhle kaFido futhi kuqinisekise ukuthi ungahlangabezana nezimfuno zomndeni nezobuchwepheshe ngaphandle kokukhathazeka nge-pooch yakho.
Abazali bezinja abanenkathi bayazi ukubaluleka kwesondlo esijwayelekile.
Ukusungula ukuzilungisa, ukondla, kanye nokuzivocavoca umzimba kuxegisa amaqhubu amaningi esihlangabezana nawo nezilwanyane zethu zokuqala.
Ukuhlangabezana nezidingo zomzimba ze-Labrador yase-Australia kungadingeka ngenkani.
Kepha ngohlelo olusendaweni nomthamo omuhle wokuzinikela, i-pooch yakho izochuma.
Kufanele uzilolonge kangaki i-Aussie Lab?
Izingxube zeLabrador Retriever Australian Shepherd ziyadingeka ukuzilungisa ngokulingene kuya kusindayo . Hlela ngokuxubha uboya babo izikhathi ezimbalwa ngesonto . Ama-aussiedors anamajazi amade noma acinene angadinga amaseshini kanobuhle kaningi.
Ungase ucabange ukuyisa i-pup yakho kumuntu ozilungisa ngobungcweti. Izilungisi ezikhanyayo nezinwele (ikakhulukazi ezungeze ngemuva kwendlu yenja yakho) kungasiza ukuzigcina zihlanzekile futhi kunciphise isikhathi osichitha ekunakekelweni kwengubo.
Noma yini oyenzayo, ungazigundi! Ukushefa inja eboshwe kabili kungenza ingozi enkulu kunokuhle, njengoba uboya babo busiza ukuvikela isikhumba sabo nokulawula izinga lokushisa komzimba wabo.
Geza kuphela lapho kudingeka nge-shampoo emnene. Lapho izinwele zabo zoma, banikeze ukuxubha okuhle ukusabalalisa amafutha emvelo kulo lonke ijazi labo.
Hlola izindlebe zenja yakho masonto onke ngezimpawu zokutheleleka. Ufuna imfucumfucu, ubomvu, noma iphunga elinamandla. Sula ezabo izindlebe ngendwangu emanzi noma amabhola kakotini.
Uma usebenzisa noma yiluphi uhlobo lokugeza, ungalubeki ngqo endlebeni. Zomise izindlebe kahle uma usuqedile ukuvimbela ukucasuka.
Kanye noma kabili ngenyanga , nquma izinzipho ze-Aussiedor yakho. Futhi qaphela uma ingane yakho inezinzipho ezinsundu noma ezimnyama!
Kunzima ukubona okusheshayo kuzinzipho zezinja ezimnyama. Thatha isikhathi sakho uhambe kancane. Uma usika izinzipho zenja yakho kude kakhulu emuva, umphumela ungaba nokudideka futhi kube buhlungu impela.
Ngokufanayo, uma uhamba isikhathi eside kakhulu phakathi kwe-puppy paw-dicures, ungagundi izinzipho zenja yakho ngobude bayo obujwayelekile ngasikhathi sinye.
Uma isinqunyiwe, ingakhula ngokushesha, ngakho-ke izoba yinde kunokujwayelekile. Nquma kancane ukuqala, linda izinsuku ezimbalwa, bese usika kancane ngaphezulu. Bazolunga ukungena ngokushesha!
Amazinyo abo kufanele abhululwe kanye ngosuku ukugcina amachopha abo enempilo. Phonsa uFido ukuhlafuna amazinyo njalo ngezikhathi ezithile ukuze uvikele i-plaque eyengeziwe.
Ukudla: yikuphi ukudla kwezinja okuhle kakhulu kwe-Australian Sheprador?
Njengoba i-Aussiedors ingama-canine asezingeni elifanele anokuqina okulingene, badinga ukudla ecebile amaprotheni .
3-4 izinkomishi zama-kibbles ezomile imvamisa inani elinempilo. Nikeza inja yakho izinkomishi eziyi-1.5-2 zokudla ngesikhathi sasekuseni nengxenye esele ekudleni. Zama ukubondla ngasikhathi sinye nsuku zonke.
Khumbula ukuthi leli nani elenzelwe umuntu omdala ojwayelekile ongu-Aussiedor. Ukudla kwenja yakho kungahluka futhi kungenzeka kushintshe ngokuhamba kwesikhathi.
Imidlwane emincane idinga ukudla okuningana okuncane, ngokwesibonelo, kepha izinja ezindala zingadla izingxenye ezinkulu njalo.
Izinga lomzimba nenja yomsebenzi wenja yakho nalo lidlala indima ekutheni kufanele lidle kangakanani.
Ukuqondanisa ukudla kwabo kwekhalori nokwakheka komzimba wabo nokukhipha izivivinyo kuzobanika uphethiloli wokuphila impilo ngokugcwele ngenkathi begwema ukuzuza kwesisindo okungenampilo.
Ngabe i-Aussiedors idinga ukuzivocavoca okungakanani?
Uma utshela iNetflix ukuthi usabuke ngaphezu kwesisodwa ngosuku, kungadingeka ukuthi uqondise ukusesha kwakho kwe-doggie kwenye indawo.
Hlangana noLuka, i-Aussiedor - Umthombo Wezithombe
Izingxube ze-Australian Shepherd Lab zibonakala zinamandla angapheli. Badinga okungenani ihora lokuvivinya umzimba ngokulingene kuze kube ngamandla nsuku zonke.
Umsebenzi oqhubekayo womzimba nengqondo ubalulekile enhlalakahleni ye-Aussie Lab. Lezi zinja zakhiwe ngokwemvelo ukuze zihlale zimatasa.
Ukubancisha amathuba okusebenza ubuchopho babo nokwelula imilenze kungalimaza ngendlela emangalisayo. Ama-Aussiedors angenazimpazamo angalimaza ngokushesha futhi acindezeleke, ngakho-ke yenza ukuzivocavoca umzimba kube yinto ehamba phambili.
Ngokujabulisayo, ama-Aussie Labs enzelwe cishe noma iyiphi i-adventure ongayicabanga.
Ukujaha ama-frisbees ngemuva kwendlu? Kuyesabeka. Udonsela ethekwini ngomdlalo olanda amanzi? Iphelele. Inqobo nje uma le midlwane isenza okuthile , bazojabula.
Bazojabula kakhulu uma ushintsha inqubo yabo yokuzivocavoca njalo. Cabanga ngale ndlela: ungadla ukudla okufanayo ngqo nsuku zonke? Vele akunjalo! Njengabantu badinga ubusha obuthile ezimpilweni zethu, kanjalo nama-Aussiedors.
Ukuze wenze ubumnandi ebhodweni, abakwaShepradors base-Australia ukushisa nokubekezelela ukubanda . Uzokwazi ukwanelisa izidingo zabo zokuzivocavoca unyaka wonke.
Noma kunjalo, uma amazinga okushisa ecwilisa noma ekhuphuka kakhulu, thatha izinyathelo zokugcina uFido enethezekile futhi ephephile. Zama ukugcina i-pooch yakho ngaphakathi ngesikhathi sezindawo ezishisayo zosuku ehlobo. Cabanga ukusebenzisa i-paw wax evikelayo ebusika beqhwa.
Ngoba i-Aussie Shepradors ihlanganisa imigqa emibili ehlukene yokuzala, ayinazo izingozi zofuzo ezifanayo nezinja ezihlanzekile (umqondo obizwa ngokuthi umdlandla we-hybrid ).
Ngesilinganiso seminyaka yokuphila Iminyaka engu-12-13 , impilo ye-Labrador yase-Australia ikhombisa impilo yonke ye-crossbreed.
Kepha ngenkathi izimo zofuzo nokwanda kwazo kungancishiswa, azikwazi ukunyamalala ngokuphelele. Abadonseli bezikhundla bangabanjwa yizifo ezifanayo zezokwelapha ezivamile ezinhlotsheni zabo zabazali. Lokhu kufaka phakathi:
I-Hip nendololwane dysplasia
Izimo zamehlo , njengama-cataract ne-PRA
Ama-Purebred Labs nawo athanda ukukhuluphala nokuqunjelwa, kanti abelusi base-Australia baziwa ngawo ukuzwela okuningi kwezidakamizwa . Wena nodokotela wezilwane kufanele nizibheke lezi zimo, futhi.
Akekho ofuna ukucabanga ngengane yakhe enoboya eba nezinkinga zempilo. Thola induduzo ngeqiniso lokuthi eziningana zalezi zifo zingavinjelwa noma zehliswe ngokunakekelwa okufanele.
Vakashela i-vet yakho kanye noma kabili ngonyaka. Gcina amarekhodi ezokwelapha enja yakho endaweni eyodwa, bese usetha isikhumbuzi ocingweni lwakho ukuze uthole ukwelashwa kwazo kwenhliziyo njalo ngenyanga kanye namazeze / umkhaza. Namathela esimisweni sakho sokondla, futhi ungaziphathi kahle.
Ekugcineni, geza i-pup yakho ngothando oluningi nothando. Ngemuva kwakho konke, izinja ezithandwayo izinja ezijabulayo, kanti izinja ezijabulayo izinja ezinempilo.
Amamiksi we-Australian Shepherd Labrador Retriever awuhlobo olusha lomklami, ngakho-ke kungadingeka ukuthi wenze okuthile ukumba ukuthola i-pup yakho ephelele.
Lindela ukukhokha $ 400 kuya ku- $ 800 uma uthenga kumfuyi. Ama-Rescue Aussie Labs azobiza kancane, imvamisa angabi ngaphezu kwama- $ 250.
Imidlwane emisha ye-Aussiedor - Umthombo Wezithombe
Ukuthola umfuyi we-Aussie Lab
Njengoba kunikezwe i-Aussiedor eyivelakancane, usesimweni esijabulisayo njengekhasimende elingaba umfuyi.
Ngoba i-hybrid ayaziwa ikakhulukazi, abathengi base-Aussiedor bangaba nezinketho ezinqunyelwe, kuya ngendawo yabo. Abafuyi beSketchy bangasebenzisa ngokunenzuzo imakethe engafakwanga.
Ngakolunye uhlangothi, abalimi abafanele bangaba nobunzima ekutholeni amakhaya afanele zonke izinjana zabo. Ngakho-ke, abathengi abanohlonze bazokwamukeleka kakhulu kunokujwayelekile.
Ukuze ubone phakathi kwezinja ezinganakwethenjelwa nezidume kahle, sebenzisa izindlela ezimbalwa ezinhle kakhulu.
Yenza ucwaningo lwakho ngaphambi kwesikhathi. Yazi izinto zakho, bese uhlela ukuthi ufuna ukubuza ini. Uma ulungele kangcono, kuzoba lula ukukala ubuchwepheshe bomfuyi wakho. Ungakhohlwa ukubuza ngesakhi zofuzo esiphindwe kabili!
Ungajahi. Ukuthenga inja akulula njengokukhetha ibhece esitolo. Zinike isikhathi sokuvakashela abafuyi ngokwabo, uhlanganyele nemidlwane yabo, futhi uhlole izinkomba. Sithembe, futhi kuzokufanele lokho uma uthola inja yakho ephelele.
Thembela emathunjini akho , futhi uqaphele amafulegi abomvu . Uma kukhona okubonakala kuvaliwe ngomfuyi, kungenzeka kunjalo.
Ukuseshwa kwezingxube ze-Australian Shepherd Lab ezithengiswayo akuzange kube nemiphumela eminingi, kepha kukhona abalimi abambalwa laphaya:
Umalusi wase-Australia, ukuxuba kwelebhu (hlola lapha ukuthola imikhondo kulitha elizayo kulo lonke elase-U.S.)
I-Hidden Valley Aussiedors nama-Aussiedoodles (EMillville, MN)
I-Australian Shepherd Lab mix mix
Ukwamukela inja kuyindlela egculisayo yabathandi bezilwane abaziqaphela izindleko. Ukudlula ekutholeni isilwane nakho kukunikeza ukuguquguquka okwengeziwe. Ungakhetha inja kunoma yisiphi isigaba sempilo futhi ukwazi kangcono ukuthola imizwa ngobuntu benja yakho ngaphambi kokwenza isinqumo.
Uma kushiwo lokho, kungahle kube nokuningi nge-Aussiedor yakho. Kungenzeka ukuthi ungabi nolwazi oluningi ngomlando we-pup yakho, ngakho-ke kuhlale kunethuba lokuthi ziyinhlanganisela eyingqayizivele yezinye izinhlobo.
Ungahlala ubheka izindawo zokukhosela zendawo, kodwa ungakhohlwa ukuhlanganisa izinhlangano ezithile zokutakula ezinjengalezi:
I-Aussie Rescue San Diego (LOKHO)
Amalebhu eLu (IBerlin, MD)
IBrookline Lab Rescue (IWarrington, PA)
I-Aussie Shepradors igcwele izimfanelo ezinhle nezici ezifiselekayo. Kwabanye abanikazi bezinja, noma kunjalo, bangahle babe nabaphuli bezivumelwano ezimbalwa.
Uma une-allergies, hlola ifayela le- I-Aussiedoodle noma Umabhebhana .
Uma udinga imvelo yokwalusa ecijile, bheka ku Umxube weBorder Collie Aussie .
Uma usemakethe yokuvikelwa kwe-canine, cabanga nge- Ukuhlanganiswa kwe-German Shepherd Lab .
Uma u ungenzi funa inja yokugada, mhlawumbe a Ukuhlanganiswa kwe-Husky Lab inketho engcono.
Hlangana noLiko, inja yase-Aussiedor - Umthombo Wezithombe
AbakwaShepradors base-Australia bangama- inhlanganisela yokusebenza kanzima nokudlala okujabulisayo.
Ngesimo sengqondo sokuvuka nokuhamba, lokhu kuqhekeka kufanelekile asebenzayo, abanikazi abanolwazi .
Ukuvivinya umzimba njalo ngokwengqondo nangokomzimba kuyisihluthulelo ekusizeni i-Aussiedor iphile ngokusemandleni ayo.
Kepha cabanga ngokucophelela ngokuthi ukuqina kwakho kuhlangana kanjani nokwabo.
Impilo yakho ibizofana kanjani neLabrador yase-Australia?
Yabelana ngemibono yakho kumazwana abekiwe!
cur, intaba / mix
umngcele collie nomxube wokuhlanganisa
pitbull yellow lab mix imidlwane
umhlophe we-german Shepherd rottweiler mix